Aogositra 6, 2018 Admin
Mpiara-miasa amin'ny fanjakana Indiana Mahindra Corp. manamboatra “blockchain distrika”
State governemanta ao India dia miara-miasa amin'ny iraisam-pirenena ny IT asa goavana ny hanao distrika ao anatin'ny renivohitry ny fanjakana natokana ho blockchain startups. Ny sampan-draharaha ao amin'ny IT Telangana governemanta panjakana dia miara-miasa amin'ny Tech Mahindra, ny ampahibemaso voatanisa mafy orina amin'ny foibe any India, izay hahita ny roa teaming ka hanao izay milaza ho ny firenena voalohany “blockchain distrika.”
Ny distrika dia hipetraka blockchain faritra iray ao Hyderabad - ny fanjakana ny renivohitra - ara-batana trano-trano sy mikotrika blockchain startups avy any India ao anatin'ny hanoto ny governemanta mba hampandroso ny teknolojia ny fampandrosoana. samy Telangana & ny mpifanolo-bodirindrina fanjakan'i Andhra Pradesh no trandrahana blockchain teknolojia nomerika rework ny taniny Registries & Efa nanomboka vao haingana samy hanana ny blockchain tontolo iainana.
52 Quintillion isan-tsegondra: Bitcoin hashrate manapaka firaketana an-tsoratra vaovao
Bitcoin ny Network hashrate firaketana an-tsoratra vaovao tonga avo tamin'ity herinandro ity, bitsika fampaherezana avy amin'ny orinasa mpaneho hevitra toy ny fanohanana ara-teknika mitohy mitombo exponentially. Data avy amin'ny Blockchain (Blockchain.info taloha) manamafy fa ny amin'izao fotoana izao dia tonga hashrate 52 quintillion hashes isan-tsegondra.
Ho fomba fampitahana, ny isan'ny fasika eto An-tany no manodidina 7 quintillion. Ny tahirin-kevitra Blockchain dia manamafy ny 60% mitombo ao anatin'ny telo volana irery. Izany no manamarika ny fotoana voalohany Bitcoin nahatratra tokonam-baravarana izany teo amin'ny tantara.
Thailand ny banky dia afaka misokatra izao sampany ny vola amin'ny cryptocurrencies
Amoron'ny Thailand (Bot), ny firenena banky foibe, Voalaza fa ara-bola eo an-toerana nanome andrim-panjakana rehetra mba hanomboka sampany alalana noho ny mampiasa vola amin'ny cryptocurrencies izay mety ihany koa ny manolotra brokerage asa ho crypto mpivarotra. Thailand ny banky dia izao ho afaka hanolotra brokerage tolotra ho crypto-mifandray orinasa, vola amin'ny crypto sy blockchain startups, na miasa ny crypto raharaha, araka ny fanambarana vao haingana ny Bot.
Na izany aza banky eo an-toerana sy ny fahazoan-dalana ihany koa ny sampany dia tsy mahazo mividy, mivarotra, na ara-barotra amin'ny anaran'ny cryptocurrencies ny mpanjifa. koa, Thailand ny banky Mety ihany no miasa amin'ny orinasa crypto nifehy ny firenena Fiarovana sy Exchange Commission (Thailand ny SEC) ary ny Biraon'ny Insurance Commission (OIC). indrindra, nomerika tsy miankina vola fifanakalozana ara-dalàna azo miorina any Thailand, rehefa vita ny fisoratana anarana dingana. Miorina amin'ny fivoaran-draharaha ireo, hita manampahefana ao Thailand dia mora mandray ny nivoatra cryptocurrency tsena.
Faharoa lehibe indrindra fifanakalozana tahiry Zavatra manambara "farany-to-end" cryptocurrency fotodrafitrasa
Rehefa avy namorona ny ombidia crypto-varotra fampiharana, ny faharoa lehibe indrindra any Alemaina fifanakalozana tahiry mbola hanaiky cryptocurrency sy ny fandraisana an-tanana farany indrindra. Boerse Stuttgart no mamorona ny varotra toerana, ary am-ponja, fa cryptocurrencies sy ny asa mifandray & Nanambara tamin'ny fomba ofisialy "Boerse Stuttgart Group dia mamorona namarana-to-end ny fotodrafitrasa ho an'ny fananan'ny nomerika. Taorian'ny fiandohan'ny cryptocurrency varotra amin'ny alalan'ny ombidia, dia tsy ho ela ho… ny toerana ho an'ny ara-barotra multilateral cryptocurrencies ary koa ny vahaolana ho azo antoka am-ponja.”
Ny fampiharana ombidia noho ny fandefasana izany fararano dia hanamora ny fidirana tsena ary hamela malalaka sy azo antoka varotra ny cryptocurrencies, manao fampiharana azy io voalohany eto amin'izao tontolo izao mba ho tohanan'ny nentim-paharazana fifanakalozana tahiry. voalohany, Hanohana ny fampiharana BTC, LTC & ny hafa. Ny toerana ho an'ny ara-barotra toy ny fananan'ny nomerika BTC dia ahitana ny lafiny farany-to-fotodrafitrasa farany. Tale Jeneralin'ny Boerse Stuttgart GmbH, Alexander Höptner hoe "mamaly izahay mba hitaky avy na antsinjarany sy ny rafitra mpampiasa vola ho voafehy sy azo antoka tontolo iainana noho ny raharaham-barotra amin'ny cryptocurrencies.” Ny asa am-ponja dia ahitana karazany foto-kevitra fiarovana ny fananan'ny nomerika ary efa azo jerena amin'ny fandefasana ny ombidia varotra App.